Kumaandooska Danab oo sheegay Saraakiil Shabaab inay dileen | STAR FM SOMALIA
Home Wararka Kumaandooska Danab oo sheegay Saraakiil Shabaab inay dileen
Saraakiisha ciidamada Kumaandooska Somaliya ayaa sheegay Gobolka Shabellaha hoose inay ku dileen Saraakiil ka tirsan Ururka Al Shabaab, sida ay sheegteen.
Idaacada ku hadasha afka Ciidamada Qalabka Sida ee Somaliya ayaa baahisay Saraakiil ka tirsan ciidamada Shabaab in lagu dilay hawlgal qorsheysan oo ka dhacay deegaanka Buulo mareer ee Gobolka Shabellaha hoose.
Saraakiisha lagu dilay deegaanka Buulo Mareer waxaa ka mid ah Zubeyr Al-muhaajir, oo ahaa Sarkaalka tababarada Al-Shabaab ee Gobolka Shabeellaha hoose iyo Sarkaal kale oo lagu magacaabi jiray Macalin Cumar.
Ninka lagu magacaabo Zubeyr Al-Muhaajir ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa Saraakiisha Ajaanibta ah ee Shabaab ka dhex dagaalama.
Ma cadda warkaan xaqiiqdiisa, maadaama Saraakiisha Ciidamada Danab ay sheegteen, balse aysan soo bandhigin cadeymo rasmi ah oo ku aadan qaabka hawlgalka ciidanka uu u dhacay.
Kumaandooska Somaliya ayaa waxa ay fuliyaan hawlgalo qorsheysan oo ay ku beegsadaan Saldhigyada Al Shabaab ay kaga sugan yihiin deeganada iyo Degmooyinka Shabaab ay maamulaan ee Gobolada dalka Somaliya.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo maanta la filaayo inuu tago Magaalada Boosaaso
Next articleGolaha iskaashiga oo Walaac ka muujiyay Daahitaanka buuxinta kuraasta ka banaan Golaha Shacabka